Dhijitari Kutengesa Mabhuku & Iyo Nyowani Nguva yekutengesa | Martech Zone
Chipiri, June 9, 2015 Chipiri, June 9, 2015 Christopher Faust
Munharaunda yanhasi yekutengesa, mamirioni ezvinetso anogona kudzivirira vatungamiriri vekutengesa kubva pakubatsira zvikwata zvavo kuzadzisa zvinangwa zvavo. Kubva pane inononoka nyowani yekutengesa inomiririra nguva kune yakasanganiswa masystem, vatengesi reps vari kushandisa yakawanda nguva pane zvehutariri mabasa uye shoma nguva chaizvo kutengesa.
Kuti ikurumidze kukura, kudzikisira kusakwana mukati mesangano uye kudzikamisa mari mukutengesa, vatungamiriri vekutengesa vanofanirwa kumisikidza michina inogumbuka uye inochinjika.
Dhijitari Kutengesa Mabhuku chikamu chakakosha chemazano matsva ekutengesa uye chinoshanda seyakakosha sosi yezvikwata zvekutengesa, ichipa hwaro hwakasimba hunotungamira vatengesi kuburikidza nemaitiro akanakisa uye inoita kuti nzira dzidzokorore pasangano rese.
Nekushandisa a Dhijitari Kutengesa Playbook mhinduro, vatungamiriri vekutengesa vanogona kutora mukana weakadzika ekuongorora maonero mune chaiyo-nguva kukurumidza kusimbisa kuenderana kune mutengi zvido uye nemabatiro ari kufambira mberi kumberi. Mapoka anobatsirwawo nekuwedzera kuoneka mune izvo zviri kushanda uye izvo zvisiri zvekugadzirisa matambudziko vasati vakanganisa kutengesa.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti isu tinorarama mune yedhijitari nyika, mamwe ma timu ekutengesa achiri kushandisa static PDF kana mapepa-based playbook. Nepo masangano aya ari munzira chaiyo yekunatsa maitiro avo ekutengesa, mapepa-akavakirwa mabhuku ekutamba haana hunhu uye masimba ane simba anodiwa kuita kubatana kwakadzika nevatengi muzuva rino uye zera.
Leveraging ichangoburwa Dhijitari Kutengesa Playbook tekinoroji, uye kutendeuka mapepa-akavakirwa kana maPDF ekuverenga mabhuku kuita inesimba inotungamirirwa mhinduro yekutengesa, uye nekudaro kugadzirisa ruzivo rwevatengi, kunogona kuvandudza nzira yekutengesa yesangano uye kugadzira yakakosha uye muchirevo hurukuro dzevatengi, uku uchiendesa izvo zvirimo chaizvo pazvinenge zvichidiwa. Munzvimbo yanhasi yebhizinesi, zvikwata zvekutengesa zvinofanirwa kuve neinoda-kuwana mukana wekutaurirana zvinobudirira netarisiro. Kugara pamberi pekuchinja zvinodiwa uye zvinodiwa ndiyo nzira yakanakisa yekuvhara chibvumirano.
Heano mashanu akanakisa maitiro kana uchiendesa Dhijitari Kutengesa Playbook
Funga nezvemapoka akasiyana ari kushandisa maSales Playbook - Ramba uchifunga, maSales Playbook haangori ekunze kwekutengesa zvikwata. Dynamic uye akasarudzika Sales Playbook anogona kuve nechokwadi chekuti zvikwata zvese, kubva manejimendi kusvika kushambadziro, zvine ruzivo rwakakodzera panguva chaiyo yekugadzirisa kutengesa uye kuchengetedza maitiro ari munzira.
Rongedza zviitiko zvetsika nema templates uye kufambiswa kwebasa - Nguva ndiyo mari yekutengesa. Kuwedzeredza mabasa anopedza nguva uye kutevera maitiro akatemerwa kunogonesa kugadzirwa uye kugona. Izvi zvinogonesa kutengesa reps kushandisa yakawanda nguva kutengesa uye kushoma nguva yekutsvaga.
Mamwe midhiya ezvimwe zvirimo - maPDF uye zvinongedzo haisi iyo yega nzira yekushandisa zvemukati. Munzvimbo dzanhasi dzakawanda-midhiya nharaunda, PowerPoint masiraidhi, mavhidhiyo, zvinyorwa, mablog mablog, uye zvigadzirwa zvekugadzira zvinoita kuti vatengesi vatangezve kupa zvimwe zvakavanzika zvemukati uye zvine simba. Shandisa huwandu hwehuwandu huripo uye gadzirisa zvaunoshandisa zvichibva pane yega yekutengesa mamiriro.
Ipa chaiwo-enguva kutungamira uye ekudzidzisa matipi - Kupa kutengesa reps kuwana ruzivo rwechokwadi-nguva pane dhiri-ne-dhiri hwaro rinovapa ivo nekugona kwekuita uku vachivaka chivimbo uye zvirinani kuvagadzirira kuhwina. Chinokosha ndechekusavakunda neruzivo rwese rwuripo. Panzvimbo iyoyo, tarisa pakusimbisa maitiro akanakisa uye nekuvapa iwo chete data ravanoda mumamiriro echibvumirano chiripo.
Kutanga kutamba nezviito zvekuita (semuenzaniso, kuzvibata, kupa) - Mabasa ekutengesa anowanzo kuvhiringidza, akareba uye akatsemuka. Kutungamira kutengesa reps nekukurumidza uye kwakananga ku-kuita nenzira yekuita nhanho dzinobatsira kurerutsa nzira yekutengesa, nepo zvichinyatso kuenderana nerwendo rwevatengi.
Tags: digital playbook mhindurokutengesa kwema digitaldigital yekutengesa bhuku rekutambadigital kutengesa mabhuku ekutambanguva yekutengesaqvidhivatungamiriri vekutengesakutengesa nguvakutengesa mazano
Christopher ndiye anokonzera kushambadzira kwepasirese, kusimudzira bhizinesi, uye nzira dzekuenda kumusika ku Qvidian. Semunhu akagona kushambadzira wepasi rose ane hunyanzvi hwedomeini muchikamu chetekinoroji, Christopher anounza rekodhi rekodhi nemakambani akakurisa.